Saakay iyo waxyaabihii ay Wargeysyada ka qoreen Suuqa kala iibsiga Ciyaartoyda - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
January 12, 2019 at 08:54 Saakay iyo waxyaabihii ay Wargeysyada ka qoreen Suuqa kala iibsiga Ciyaartoyda2019-01-12T08:54:19+00:00 CAYAARAHA
(Europe) 12 Jan 2019. Waxaa dib u furmay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda kaa oo tixnaan doona ilaa 31-da bishan.
Barcelona ayaa dooneysa inay dhageysato dalabyada lagu doonayo xiddigeeda qadka dhexe ee Philippe Coutinho, 26-jir, Manchester United ayaa xiiseynaysa inay suuqa xagaaga la soo wareegto laacibkii hore ee Liverpool. (Calciomercato)
Barcelona ayaa ka fikireysa inay dalab labaad ka sameyso xiddiga reer Brazil ee garabka kaga ciyaara Chelsea ee Willan, kaddib markii khamiistii laga soo diiday dalabkii hore ay ka gudbiyeen 30-jirka. (Standard)
Chelsea ayaa heshiisyo mabda’ ahaan la kala gaartay Cagliari kaa oo ku aadan xiddiga qadka dhexe reer Talyaani Nicolo Barella, 21-jir iyo kooxda Zenit St Petersburg oo ku aadan xiddiga qadka dhexe reer Argentina ee Leandro Paredes, 24-jir. (Telegraph)
Tababaraha AC Milan Gennaro Gattuso ayaa sheegay inay socdaan wada hadalada ay ku jiraan wiikiilada weeraryahankooda 31-jirka ah ee Gonzalo Higuain iyadoo ay jiraan qiyaas fikradeedka inuu u dhaqaaqayo Chelsea. (Express)
Mudnaanta koowaad ee Chelsea suuqan kala iibsiga ayaa ah sidii ay amaah ugu soo qaadan lahaayeen Higuain inta ka harsan kal ciyaareedka. (Sun)
Aabaha dhalay xiddiga reer Brazil ee PSG Neymar ayaa beeniyay wararka xanta ah ee ku aadan in 26-jirkiisa uu doonayo inuu dib ugu laabto kooxdiisii hore ee Barcelona. (Express)
Liverpool iyo Fulham ayaa labaduba doonaya inay la soo saxiixdaan weeraryahanka Yahuudiga ah ee naadiga Red Bull Salzburg Moanes Dabour, 26-jir. (Estadio Deportivo)
Tababaraha Everton ayaa wax cabasho ah sameyn doonin haddii ay kooxdiisu xiddigo cusub keeni wayso suuqan Janaayo inkastuu jeclaan lahaa labo ama saddex saxiix oo Cusub. (Liverpool Echo)
Leeds ayaa lagu wadaa inay la soo saxiixado Goolhayaha Real Madrid ee Kiko Casilla. 32-jirka ayaa lagu wadaa inuu Ingiriiska u soo duulo usbuuca soo socda. (Yorkshire Evening Post)
Juventus ayaa suuqa xagaaga dooneysa inay dib ula soo saxiixato xiddiga qadka dhexe reer France Paul Pogba 25-jir, Manchester United ayaana la warinayaa inay ka fikiri doonto midaa waa haddii xiddiga garabka ka ciyaara ee reer Brazil Douglas Costa, 28-jir uu u soo dhaqaaqayo Old Trafford iyadoo qeyb looga dhigayo heshiiska. (Tuttosport)
Juventus ayaa diyaar u ah in daafaceeda dhexe ee reer Morocco Medhi Benatia, 31-jir u bandhigto Arsenal iyadoo qeyb uga dhigeysa heshiiska uu laacibka qadka dhexe ee Reer Wales Aaron Ramsey, 28-jir uu dhanka kale ugu soo dhaqaaqayo. (Gazzetta dello Sport)
Barcelona ayaa ka fikireysa inay heshiis amaah ah ugu soo dhaqaaqdo weeraryahanka reer Spain ee kooxda Chelsea Alvaro Morata 26-jir kaa oo sidoo kale bartilmaameed u ah kooxaha Sevilla iyo Atletico Madrid. (Sport)
Kabtanka Arsenal Laurent Koscielny, 33-jir ayaa iska diiday dalab kaga yimid naadiga Monaco. (Le10 Sport)
Monaco ayaa wada hadalo kula jirta Chelsea kaa oo ku aadan dhaliyaha reer Belgium ee Michy Batshuayi, 25-jir. Wakiilka Laacibka ayaa u duulay France si uu u galo wada hadalo dhaqaaq suuro gal ah. (Goal)
Waxaa kuu Diyaariyay Madaxa Webka ahna Tafaftiraha: Abdisamed Mohamed Hassan. (Black Yare)
« EPL: Hordhaca, safafka macquulka ah, xiddigaha seegi kara kullanka iyo wax walba oo ku saabsan kullanka Wets Ham vs Arsenal.
Mahad Salad: Sharciga Bankiga dhexe oo la rabo in wax laga bedelo ayaa Baarlamaanka la horkeenayaa si Ajnabi loogu dhiibo »